U dirista lacag Somaliland – Transfer Galaxy
U dirista lacag Somaliland
Wakhti intee leeg bay qaadanaysa?
- Mobile money: Ilbiriqsiyo gudahood
- Cash pickup: Isla markiiba waad qaadan kartaa
Maxay yihiin ugu yaraan iyo ugu badnaantii xaddiga lacagta la diri karo?
Maadaama ay lacagta kala duwanaan karto iyada oo ku xiran meesha iyo sida aad u direyso waxaan kugula talineynaa in aad ka hubiso xaddidkaaga bogga xisaabinta lacagta. Si aad u eegto xaddidka gaar ah, waxaad ku qortaa inta aad rabto inaad u dirto xisaabiyaha. Waxay kuu sheegi doontaa haddii aad ka hooseeyso xaddiga ugu yar ama xadid badan ama hadii aad dhaaftay intii lagugu talo galay.
Waa kuwee shirkadaha xawaaladda lacagta ee Somaliland ee aad u dirtaan?
Waxad ilbiriqsiyo u diri kartaa Telesom ZAAD.
Fadlan ogow waxaa jiri kara xaaladdo ka baxsan awooda Transfer Galaxy ee saameyn karta lacad wareejinta / xawaalad dirida, sida dhibaato ah xagga korontada, isgaarsiinta, xiriirka internetka iwm. Haddii aan la kulanto dhibaatooyin, fadlan la xiriir kooxda Taageerida Macaamii